Beesha Caalamku Waa Inaysan Micno Weyn U Yeelin Xukuumad Hadii Baarlamaanku Kala Diray | Kaafi News
Beesha Caalamku Waa Inaysan Micno Weyn U Yeelin Xukuumad Hadii Baarlamaanku Kala Diray
Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya, Cabdinuur Maxamed Axmed, oo ka qeyb galay dooddii xalay ka baxday telefishinka BBC Somali, ayaa sheegay in beesha caalamka looga baahan yahay inay garab istaagto hay’adaha dastuuriga ah ee wali dhisan.
Hadalkan ayuu Cabdinuur ka sheegay falanqeyn lagu sameynayay qodobka doodda oo ahaa: “Saameyn intee la eg ayey xil-ka-qaadistii Ra’iisul Wasaarihii xukuumadda ku yeelan kartaa geeddi socodka siyaasadda Soomaaliya iyo doorashooyinka sannadkan?”
“Muddo xileedka madaxweynuhu waa afar sano, doorashaduna waa inay dhacdo afar sano oo kasta. Way dhici kartaa in cillado ay sababaan dib u dhigis labo ama saddex bilood ah, horayna taasi way usoo dhici jirtay”, ayuu yiri.
‘Beesha Caalamka haddii ay hal qof maalgashaneysay, qofkii wuu tagay’
Qoraalka sawirka,Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya, Cabdinuur Maxamed Axmed